mai chisamba - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag 'mai chisamba'
mai chisamba Mapurisa (ZRP) wasu hwindi vapositori vharazipi
mai chisamba chinoz gumbura vharazipi Robert Mugabe prophet magaya Macheso
mai chisamba mukadzi zbc murume basa imba
Kunamata kwaoma, mafundisi nama prophet ari kungo para mhosva
Yah kunamata muno munyika kwakuite kwechioma diko. Ndakatanga ndiri kwamadzibaba Nzira ndokubva asungwa nge rape case. Kwakuti regai ndiende kwaGumbura wanike isame issue. Pandakati rekai hangu ndidzokere kuchipostori bvandaenda kwamadzibaba Ishimairi, iye kwakutifurira kuti tirove mapurisa tichiobve tasungwa . Kwakoenda hangu kwapastor Evan achibva atiza America. Bvandaenda hangu kwaMadungwe wanike akutotizire hake kudenga kwakubudira kwamai Chisamba. Ndechoenda hangu kwaMagaya. Imwi we. Achipedza kundinamatira police ichiosvike nendaa yekuti wakaite rape. Ngenyi anhu arikudai. But why
mai chisamba mapositori gumbura prophet magaya Walter Magaya rape case 2016 madzibaba Nzira Evan Mawarire